सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ ? हेर्नुहोस् – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ ? हेर्नुहोस्
सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ ? हेर्नुहोस्
1,454 1 minute read
सार्वजनिक सवारीसाधन सुचारु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका एकसाताभित्र टुङ्गो लगाउने भएको छ । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग नयाँ निर्देशिकाका बारेमा छलफल भइरहेको र एकसातामा टुङ्गो लगाइने विभागले जनाएको छ । यातायात सञ्चालनका लागि तयारीका काम पनि भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो ।
तर सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो सरकारले नगर्दा अन्योल रहेको विभागले जनाएको छ । सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको कुनै जानकारी विभागलाई दिइएको छैन तर बन्दाबन्दी बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएपछि यातायात पनि सञ्चालन हुन्छ होला भन्ने अनुमानले विभागले काम गरिरहेको छ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपरे कसरी गर्ने भनेर विभागले नयाँ निर्देशिका तयार गरेको हो तर यातायात व्यवसायीले नयाँ निर्देशिकामा असहमति जनाएपछि छलफल लम्बिएको हो ।
महानिर्देशक हमाल भन्नुहुन्छ, हामी छलफलमै छौँ, व्यवसायी मजदुरसँग अहिले लिखित रायसुझाव मागेका छौँ, व्यवसायीको पनि आफ्नै समस्या छन्, लामो समय गाडी थन्किँदा आर्थिक भार पर्न गएको छ, बैङ्क किस्ताको समस्या पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ अब हामी आउने हप्ता टुङ्गोमा पुग्छौँ ।यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
आठ बर्षिय बालकको कोरोनाका कारण दुखद निधन
पूजा शर्मा यी युवकको प्रेममा ! (तस्वीरसहित)
युवती घटना पछि राउटे बस्तीमा फेरी अर्को डर
बाँकेमा कोरोनाबाट १८० जनाको मृत्यु
55 mins अघि